Shir video-conference ah oo ay wada yeesheen masuuliyiinta xidhiidhka arimaha dawlada ee Deegaanada JDFI. - Cakaara News
Shir video-conference ah oo ay wada yeesheen masuuliyiinta xidhiidhka arimaha dawlada ee Deegaanada JDFI.
Jigjiga( cakaaranews )Talaado 17ka May 2016. Kulan video conference lagu yeeshay islamarkaana lagaga wada hadlayey Hawlaha abaabulka guulaha sanad guurada 25aad ee 20ka ginboot ayaa kaqabsoomay Hoolka shirarka ee maqal iyo muuqaalka ee xafiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha DDSI. Kaasoo ay kasooqayb galeen wasiiru dawlayaal, madax xafiiseedyo iyo agaasimada xidhiidhka dadwaynaha ee dawlad deegaanada dalka JDF.I iyada oo ay deegaankeena uga qayb galeen wasiirka xafiiska xidhiidhka arrimaha dawlada, dhaqanka iyo dalxiiska DDSI Mudane eng. idiris ismaacil oo ay wehelinayeen xubnaha xidhiidhka dadwaynaha ee xafiisyada heer deegaan.
Hadaba wasiiru dawlaha Hay'adaha dawlada ee Golaha wakiilada shacabka JDFI mudane Amanuel oo kulankan Hogaaminayey ayaa sheegay in soo dhawaynta xuska sanad guurada 25aad ee 20ka ginboot ay muhiim tahay in lagu xuso waxqabadyadii ay qabteen deegaanadu isagoo Xukuumada DDSI Ku amaanay waxqabadka wanaagsan ee dhinacyada horumarka iyo maamulka suuban. Wuxuuna carabka ku dhuftay in dimuqraadiyada iyo horumarka dalku uu marayo meeshii ugu fiicnayd ee uu abid soomaro.
Sidookale, waxaa isna dhinaciisa ka hadlay wasiirka xafiiska xidhiidhka arrimaha dawlada, dhaqanka iyo dalxiiska DDSI Mudane eng. idiris ismaacil oo sheegay in shirkan lagaga wada arinsanayay soo dhawaynta iyo abaabulka sanad-guurada 25aad ee 20ka ginboot. Wuxuuna intaa ku daray in xukuumada iyo XDSHSI ay wadaan diyaar garaw adag oo loogu jiro munaasabada 20ka ginboot oo ay kadhimantahay 11 cisho oo kaliya iyadoo shirkana uu ahaa mid ay deegaanada iyo ismaamuladu ay iskula qaada dhigayeen waxqabadkii dawlada 25ka sano dhinacyada horumarka iyo maamulka suuban. Wuxuuna wasiirku xusay inay wakaaladaha wararka ee WAALTA, EBC iyo Wakaalada warbahinta DDSI ay deegaanka kawadaan dukumentry film 20ka ginboot ah xafiskiisuna uu daabici doono documentiyada guulahii lagaadhay 25ka sano.
Ugu danbayna waxaa ka hadlay shirkan gadhwadeenka xidhidhidhka deegaanada ee Wasaarada xidhidhka arrimaha dawlada JDFI Ato yamane Abraham oo ku booriyay dhamaan xubnihii kasoo qaybgalay in door kooda kaga aadan ay kaqaataan horumarka dalka islamarkaana ay baahiyaan bulshadana gaadhsiiyaan wixii laqabtay iyo waliba waxa laqaban doono intaba.